About | No.1 myanmar cars websiteNo.1 myanmar cars website
မြန်မာပြည်က ကားဝယ်လိုသူများနှင့် ရောင်းချသူများ အတွက် လွယ်လွယ်ကူကူနှင့် ကားကြော်ညာများတင်နိုင်အောင် နေရာတစ်နေရာ အဖြစ်ဖန်တီးထားပါတယ်။
ဝေဖန်အကြံပြုချက်များကိုတော့ info@myanmarcarsmarket.com ကို ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်
iitcm May 20, 2012 at 12:31 pm
Very good for all buyers and sellers. I wish you can get more info about the care markets in future. Thank you so much for your information about car market in Myanmar. That’s essential information for all buyers and sellers in Myanmar. I appreciate that. Thank again.
Reply	Myanmar Life May 21, 2012 at 11:30 pm
Excellent site, cheers – we need this kind of site.
Reply	မျိုးသော် May 24, 2012 at 1:23 pm
လိပ်စာ ဒါမှမဟုတ်ဆက်သွယ်ရမဲ့ လိပ်စာတွေ ဖုန်းနံပါတ်တွေ ထည့်ပေးနိုင်ရင် ပိုမကောင်းဘူးလား .. အခုက ဘယ်ကိုဆက်သွယ်ရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေတယ်
Reply	Ni Ni Myo May 26, 2012 at 7:41 am
ကားဝယ်လိုရောင်းလိုသူများအတွက် ဆုံမှတ်ကလေးအဖြစ် အရမ်းအဆင်ပြေစေ ဗဟုသုတရစေတဲ့အတွက် စီစဉ်ဖန်တီးသူတွေကို လှိုက်လှဲစွာကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ဒီထက်ပိုအောင်မြင်နိုင်ပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်။
Reply	nanyu81 May 26, 2012 at 10:06 am
The vital ads missed engine power, diesel or gasoline?
Reply	Nyo Min Oo May 30, 2012 at 10:10 am
What i’m advertised Hyundai Santafe 2008 model & Hyundai Terracan 2004 model cars are Diesel & these are Yangon price not CIF Yangon,Price are including – permit,customs duty & tax,ka nga na licence fees.
Reply	Nyo Min Oo May 30, 2012 at 10:13 am
2200cc & Diesel
Reply	nanyu81 May 26, 2012 at 10:09 am
Keep on posted me 12o lakhs belta toyota 2002 model
Reply	zarni May 28, 2012 at 5:29 pm
ကျွန်တော်.ကား(၂) စီး တင်ထားတယ်။ရောင်းရရင်မုန့်ဝယ်ကျွေးရမယ်။သိပ်ကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်ပါ။နိုင်ငံတကာမှာသည်လိုဝယ်နေရောင်းကြတာပါ။တိုးတက်လာပါစေဗျာ။
Reply	kyaw May 29, 2012 at 5:25 pm
Awesome site , well done Hein.
Reply	Nyo Min Oo June 1, 2012 at 10:38 am
I think u should format amendment section so that seller can change their price & etc.Tks
Reply	aung June 6, 2012 at 9:13 am
ကုန်တင်ယာဉ် လိုချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ… ၅ တန် -၇တန် ပတ်ဝန်းကျင်… တရုတ်ကားကို ပိုကြိုက်တယ်… dong feng ထဲကပေါ့…
Reply	cleverlay.009@gmail.com June 14, 2012 at 9:16 pm
hilux surf 99 model if silver, engine 2.7 cc 240 lakh 09 511 9895
Reply	aungsaw June 6, 2012 at 9:28 pm
its very good program for all of the car crazy.
Reply	aung lwin July 3, 2012 at 4:47 pm
ကားသွင်းတာနဲ့ပတ်သက်တက် သတင်းအချက်အလက်တွေ စုံလင်အောင်တင်ပေးစေချင်ပါတယ်။
ဥပမာ…စီပွားကူးသန်းမှ ထုတ်ပြန်ထားသော ကားတင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒအပြောင်းအလဲနှင့်
ကြေညာချက်များ၊ အခွန်ဆောင်ခြင်းအဆင့်ဆင့်၊ ကညန၀င်ခြင်းအဆင့်ဆင့်၊ စတာတွေကို တင်ပေးစေချင်ပါတယ်။
Reply	ko htet August 1, 2012 at 10:22 am
Ven 96 Disel ?
Reply	naymoehnin September 5, 2012 at 6:02 pm
ခုလို ကားမားကက်ဆိုက်ကို ထောင်တာအရမ်းကောင်းပါတယ် ။အရမ်းလည်းဝမ်းသာပါတယ်။ ကျွန်တော် register လုပ်ပြီး ကားကြော်ငြာတာ နည်းလမ်းအတိုင်းလုပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် public မှာကို့ တင်တဲ့ကားတောင်ပြန်ရှာရခက်နေပါတယ်၊ အဆင်ပြေအောင် ဂျပန် လေလံ ဆိုက်ကဲ့သို့ လုပ်သင့်ပါတယ် ။ www. jpcenter .ru
Reply	admin September 5, 2012 at 7:45 pm
အခုလိုအကြံပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တင်ထားပြီးသား ကားများကို ပြန်ကြည့်ချင်လျှင် login လုပ်ပြီး http://myanmarcarsmarket.com/my-account မှာ အားလုံးကို ကြည့်နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျား…
Reply	zaw min aung September 13, 2012 at 10:47 pm
I want mitsubishi 2002 canter truck.Please,let me know total price.
Reply	Justin September 27, 2012 at 7:54 pm
Admin ခင်ဗျာ…ကားနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ပို့စ်လေးတွေ တင်လို့ရအောင် ဖွင့်ပေးစေချင်ပါတယ်။ Admin တင်နေတာ တွေ့လို့ အားကျလို့ပါ…
Reply	kyaw zayar thin September 28, 2012 at 12:49 am
please, how to change the price ?
Reply	kyaw zayar thin September 28, 2012 at 12:23 pm
how to change the car price ??
Reply	admin September 28, 2012 at 2:00 pm
ကျွန်တော်တို့ ဆိုက်မှာ ကားတင်ထားသူများအတွက် တင်ပြီးသွားလို့ ကားရဲ့ အသေးစိတ်ကို ပြင်ချင်ရင် အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ကြည့်ပါ
၁ – ဦးစွာ login လုပ်ပါ
http://myanmarcarsmarket.com/login မှာ သင့်ရဲ့ user name နှင့် password သုံးပြီး login လုပ်ပါ။
၂ – ကိုယ်ပြင်ချင်သော ကားအား ရှာခြင်း
ပြီးလျှင် http://myanmarcarsmarket.com/my-account ကို သွားပါ။ ဒါဆိုရင် တင်ထားသော ကားများ အားလုံးကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကား၏ အသေးစိတ် အချက်အလက်များ ပြင်ချင်လျှင် edit နိုပ်ပါ။
ကားကို myanmarcarsmarket မှ ဖယ်ချင်လျှင် delete ကို နိုပ်ပါ။
Reply	aungthuhein October 2, 2012 at 12:55 am
ကိုယ်ကြိုက်တာတွေကို ကို့အကောင့်မှာ favorite ပေးပြီးမှတ်ထားလို့ရပါသလား…ပြန်ပြန်ရှာနေရလို့ပါခင်ဗျား…..
Reply	Ko Nay Lin October 26, 2013 at 12:05 pm
ကျွန်တော့် ကားကြော်ငြာ တင်ထားပါတယ်။ car model နှစ်ခု ဖြစ်နေလို့ 2004 ကိုပဲ ကြော်ငြာပေးပါ ။
Reply	aungthuhein October 1, 2012 at 11:42 pm
Reply	Ko Phyoe October 27, 2012 at 9:36 pm
I would like to know about the custom, Ka Nya Na and other taxes about 2006 and under model car. Please share me updated information.
Reply	Nilar Htwe November 9, 2012 at 10:58 am
အကောင့် ပိတ်ချင်ပါတယ် ဘယ်လို့ လုပ်ရမှာလဲ..
Reply	sorryiloveu December 19, 2012 at 5:13 pm
Mark X 2012 ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ?
Reply	Thant Zin March 10, 2013 at 6:09 am
ကား ပါမစ် နောက်ဆုံး သတင်းနဲ့ တင်သွင်းပုံ နည်းလမ်း အဆင့်ဆင့် ကို တင်ထားပေးမယ် ဆိုရင် ပို ၀ယ်သူတွေ အတွက် ပိုအဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ်။
Reply	ye tun April 27, 2013 at 3:05 pm
i can’t post my car in your website, please give me some advice
Reply	Aung Chan Min May 4, 2013 at 11:47 am
register လုပ်ပြီး password က mail ထဲကို မရောက်ဘူးဖြစ်နေတယ်….
password မသိလို့ ကူပေးပါဦးဗျာ…
Reply	chanayenaing May 5, 2013 at 9:40 pm
check the spam mail box
Reply	Ye Htike Hain September 14, 2013 at 5:38 am
Mitsubishi canter 10 ft (Dance) 2003/04 ရဲ့ တန်ဖိုးနဲ့
ကားရှိလျှင် အချက်အလက်လေးတွေကြည့်ချင်ပါသည် ……
Reply	SOE LWIN December 11, 2013 at 11:38 am
အခုလိုလုပ်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်တော်အခက်ခဲလေးတစ်ခုက အခုကျွန်တော် တင်လိုက်တဲ့ ဟာကိုအများနည်းတူပြန်ကြည့်တာ မမြင်ရလို့ ၊ပြင်တာရတယ်
Reply	Naytinmoe December 29, 2013 at 7:33 pm
ဒီလ ၂၅ ရက်နေ့ ကတင်ထားတဲ့prado တနဖိုး သိန်း၇၀ ကားကိုဆက်သွယ်ချင်ပါတယ်။ ဖုန်းနံပါတ်လေးသိပါရစေ ကျေးဇူးပါ
Koyelay Geo: လိုင်းထဲ လိုရ ရင် �...
Jhon Palldo: ho...
Tuntun Lwin: ကုန်တင်ချင်၇င်တေ�...
Tun Tun Win:alann gyi
Win Thant: ကီလိုမီတာ ဘယ်လောက�...
7 seater.tv back cam
PW Both Rear and Front Leaf spring ( Lay type ) Box or Flat body available .
RVR ကားရောင်းသူ တစ်ဦးချင်း၏ ကားများ surya မှ ရောင်းရန် 98 ကား ရောင်းရန်ရှိ
rafiqc800 မှ ရောင်းရန် 90 ကား ရောင်းရန်ရှိ
Ko Aung Moe Lwin မှ ရောင်းရန် 87 ကား ရောင်းရန်ရှိ
ko naing htwe မှ ရောင်းရန် 59 ကား ရောင်းရန်ရှိ
United Eleven မှ ရောင်းရန် 59 ကား ရောင်းရန်ရှိ
16blackwolf မှ ရောင်းရန် 53 ကား ရောင်းရန်ရှိ
leonchinwl မှ ရောင်းရန် 52 ကား ရောင်းရန်ရှိ
Si Thu Lin မှ ရောင်းရန် 50 ကား ရောင်းရန်ရှိ
© 2013 Myanmar Cars Market – Find cars price, cars news, cars showrooms in Myanmar Online. All Rights Reserved.	Marketed by myOpenware